Izitshixo ezi-4 zomtshato ogqibeleleyo | IBezzia
Izitshixo ezi-4 zomtshato ogqibeleleyo
UMaria vazquez | 08/09/2021 10:00 | Umtshato
Yintoni ebalulekileyo emtshatweni ukuze ufezeke? Zininzi izinto ekufuneka zithathe isigqibo, abantu abaninzi abanokunxibelelana nabo, kangangokuba akukho mntu unokumangaliswa kukuba abantu abaninzi beqesha iinkonzo zenkampani. Ingcali ekucwangciseni umtshato okanye kumcwangcisi womtshato.
Esinye sezihluthulelo zokubhiyozela umtshato ogqibeleleyo lukugcina umbutho ngononophelo nganye yamalungiselelo. Kungenxa yokuba ukongeza kwiminqweno kunye nehlombe, kukho ezinye iimpawu eziyimfuneko ukujongana naloo msebenzi wangaphambili njengomonde nokulungelelana. Kukho izitshixo ezimbalwa zomtshato ogqibeleleyo kwaye zininzi ngexesha elinye.
1 Isingqisho esihle
2 Indawo elungileyo
4 Iindwendwe zomtshato
Umbutho olungileyo ngundoqo ukuze usuku lomtshato lufike Yonke into isebenza njengoomatshini abagalelwe ioyile ngokugqibeleleyo. Ukuba iindwendwe akufuneki zilinde ixesha elide kwindawo yesidlo ukuze kufike umtshakazi nomyeni, bayazi apho kufuneka baye khona ngalo lonke ixesha, akukho xesha lide kakhulu phakathi kwamacwecwe okanye ukuba kanye isidlo umbhiyozo wonke umntu angaya ekhaya ngokukhawuleza isitshixo somtshato ogqibeleleyo.
Zininzi izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo kwaye kunzima ukukhululeka emtshatweni kwaye wonwabe ukuba kuya kufuneka wazi zonke ezo zinto kumntu wokuqala. Ngesi sizathu, baya besanda abantu ababhejayo ekudluliseleni nasekufumaneni umntu oyingcali kumbutho ecaleni kwakho ngosuku olubaluleke ngolu hlobo. Kulula ukuyiqonda, akunjalo?
Uzoba phi umtshato? Yi le Esinye sezigqibo ezibaluleke kakhulu ubuso bomyeni nomyeni. Izibini zihlala zicacile malunga nokuba yeyiphi imisitho abayifunayo, nokuba ngumtshato waseburhulumenteni okanye umtshato wenkolo, kodwa hayi kakhulu apho bafuna ukubhiyozela oku kunye nesidlo esilandelayo.
Kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, esi sigqibo besilula. Imisitho yacuthwa ukusuka kwinkundla yaya ecaweni kwaye iiquququ zazibanjelwa kwiihotele ezinkulu nakwiivenkile zokutyela. Namhlanje, nangona kunjalo, amathuba anokuphela: iifama, izindlu zeefama, igadi… Zonke ziyafumaneka kwizibini ezitshatileyo.
Eyona nto ibalulekileyo kukubheja indawo apho wonke umntu anokuziva ekhululekile; sobabini singamakhwenkwe kunye neendwendwe. Yintoni esiyiqondayo ngokonwaba? Sukuziva ungabikho endaweni okanye utyhafile; yenze ibe yindawo ebenza bazive bekhululekile kwangoko.
Kwakhona, ukuba indawo ayifikeleleki ngokwaneleyo, kufuneka sinike iindwendwe zethu indlela yokufika apho. Qesha inkonzo yebhasi enokuthi kuqala ihambise iindwendwe esidlweni emva koko, ekupheleni kwesidlo, iye kumakhaya abo.
Iinkcukacha zibaluleke kakhulu kwaye zinokuguqula indawo. Iintyatyambo kunye nezibane mhlawumbi zezona zibalulekileyo xa kufikwa kumhombiso womtshato. Zombini zinako ukwenza yenza indawo yamkele ngakumbi kwaye ibe nomtsalane.
Iintyatyambo zibalulekile etafileni. Ngokufanelekileyo, xuba amaziko asezantsi kunye aphezulu ukunika intshukumo; Oku kuyacetyiswa ngabo babuqondayo obu bugcisa. Kwaye ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luqinile, ungasoloko ubeke iintyatyambo ezinamagqabi aluhlaza.
Ukukhanyisa kubalulekile, ukongeza ekwenzeni indawo yamkele ngakumbi kwaye inomdla, ukuyilungelelanisa neeyure ezahlukeneyo zemini. Ukukhanya okufanelekileyo kubalulekile fumana imifanekiso elungileyo. Kwaye yinto yokhuseleko. Ukuba isidlo sasebusuku, kuya kufuneka siqinisekise ukuba iindwendwe zifumana zonke iindlela ezikhanyayo.
Emtshatweni, iindwendwe ziphambili. Kufuneka bazive bekhululekile ngalo lonke ixesha, bazi ukuba bangaya phi, njani kwaye nini. Ukongeza, kufuneka sinikeze, kangangoko sinakho, ulwazi malunga nesixeko kwabo bahambayo kwaye, njengoko besesitshilo, iindlela zokuya nokubuya emtshatweni ukuba le asiyondawo ifikelelekayo.
Ukuba ufuna ukuba ne- iinkcukacha kunye neendwendwe Eyona nto ibalulekileyo kukuba babheje ngento abanokuyisebenzisa emtshatweni okanye ekhaya. Sithetha ngeespadrilles, abalandeli, iiplaids, izikhafu ...
Sithetha ngalo lonke ixesha malunga neendwendwe kwaye yile nto Zikhethe kakuhle iindwendwe kwaye uzivumele zonwabe Sesinye sezona zitshixo zibalulekileyo kumtshato ogqibeleleyo. Kwaye ngokukhetha kakuhle sithetha ukumema abo siziva sikhululekile phakathi kwabo. Umtshato uza kuba lusuku olubalulekileyo, oluhle kodwa olunovalo kakhulu, ke kungcono ukuba ungqongwe kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umtshato » Izitshixo ezi-4 zomtshato ogqibeleleyo
Imikhwa enceda ukuqinisa isibini